Mayelana NATHI - Wuxi Co-See Packing Co., Ltd.
1.Isupplier for Brands Maui Jim, Costa, Spy, Komono, BCBG, Fielmann njll.
2.Contain ahlukahlukene izibuko, izibuko ozimele, umbukwane amacala, imikhiqizo ukunakekelwa eyewear njll
3.OEM. Yamukela i-oda lesilingo lobuningi obuphansi.
Isipiliyoni se-4.10 +, i-CO-See inikeza insizakalo ehlukile.
Abathengisi be-5.Professional, banikela ngamakhasimende amahora angama-24 online
Sinamakhasimende emazweni angaphezu kwama-30 futhi idumela lethu elihle likhona phakathi kwamakhasimende amasha namadala.
Sizibophezele ekuhlinzekeni zonke izinhlobo zekhwalithi ephezulu yezingilazi ikesi nezesekeli zokwakha nezinsizakalo zokukhiqiza zamakhasimende emhlabeni wonke.
Amathimba ethu okuthengisa anomsebenzi nobuchwepheshe obuphakeme. Sinikezela ngamakhasimende ethu insizakalo ye-inthanethi yamahora angama-24 evela kuwo wonke umhlaba, ephendula imibuzo mayelana nezinto ezibonakalayo, usayizi, ilogo nokunye ukwenza ngokwezifiso kwephakheji.
Njengoba singumkhiqizi, sinikeza ukuthengwa kwezindleko eziphansi, ukuthenga ngakunye nokuqapha ikhwalithi.
Sinikeza iphakethe lomkhiqizo osheshayo nokuthunyelwa okufika ngesikhathi. Ukupakisha kwethu kuzonciphisa ukulimala kwemikhiqizo ngenkathi kuthuthwa nokusakazwa ngangokunokwenzeka, kuqinisekiswe ukuphepha kwemikhiqizo, kube lula ukugcinwa, ukuthuthwa, ukulayishwa nokulayishwa, futhi kusheshise ukuhlolwa kwamaphoyinti okunikezela.
Ukunamathela ekuzinikeleni kwethu ukwanelisa izidingo zokupakisha zamakhasimende, sihlola zonke izinhlobo zemikhakha ukuhlanganisa amaketanga ethu wokuhlinzeka nezinsizakusebenza, ukuze sinikeze amakhasimende ethu insizakalo yokuthenga eyodwa, okuhle nokwazisa ikhasimende.